Fahazaran-dratsy an'ny alika ratsy sy ny fomba fanamboarana azy ireo | Alika Manerantany
Tsy misy isalasalana fa ny alika dia biby mahafinaritra ary izy no orinasa tsara indrindra ho an'ny olombelona. Ny fananana alika toy ny biby dia mitondra tombony be dia be amintsika, nefa koa misy fatiantoka sasany. Ary izany ve Indraindray izy ireo dia mandray fitondrantena ratsy izay manery antsika isan'andro. Miresaka momba ny fahazaran-dratsy ratsy fahita indrindra sy ny vahaolana mety hitranga izahay.
1 Tsy miraharaha ny baikonay izy ireo
2 Mipaoka rehefa mandondona am-baravarana
3 Mitomany hanafatra sakafo
4 Ahiahy misaraka
7 Mialà sasatra ao an-trano
8 Tsoahy ny fehy
9 Manimba zavatra
Tsy miraharaha ny baikonay izy ireo
Raha misy alika sasany tonga avy hatrany amin'ny antsontsika ka mankatoa ny baikontsika, ny sasany kosa tsy miraharaha azy ireo tanteraka. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ireo vondrona roa ireo dia izany ny teo aloha efa nozarina tsara fa ny faharoa kosa tsy nanao.
Raha ny fitsipika dia toa hitantsika fa tsy zava-dehibe ny tsy fanarahan'ny biby ny torolalantsika, fa ny marina dia izany amin'ny toe-javatra sasany dia mety hiteraka olana izany. Ohatra, raha tiantsika hamoaka zavatra izay naloaky ny vavany ilay alika ary mety hanimba azy io.
Tsotra ny vahaolana amin'ity tranga ity, saingy mila fotoana sy faharetana. Ny famerimberenana sy ny fanamafisana tsara dia fanalahidy lehibe mba hampianatra ny hankatò antsika ilay volom-borona. Tsy tokony hiantsoantso azy mihitsy ianao ary, mazava ho azy, ny sazy ara-batana dia tsy safidy.
Mipaoka rehefa mandondona am-baravarana
Ny alika dia biby mpiaro sy faritany amin'ny natiora, noho izany dia hirehitra izy rehefa misy mandondom-baravarana io no fomba niarovany ny trano. Izany, fitondran-tena mahazatra, ary sarotra ny manitsy.
Tsy azo atao ny mametaka ny alika na oviana na oviana rehefa mahatsikaritra ny fisian'ny olona ao ambadiky ny varavarana, fa eny ireo barking manahirana ireo dia azo ahena. Ho an'ity, tsy misy tsara noho ny 'fampiharana'. Azontsika atao ny mangataka namana na havantsika handondom-baravarana ary, rehefa manomboka mibontsina ilay biby dia ampitony amin'ny filaminana milamina nefa milamina. Raha vao mangina izy dia homenay sakafo sy safosafo isika.
Mitomany hanafatra sakafo
Tsy maninona ny sakafo nohanin'izy ireo; misy alika tsy afa-po mihintsy. Noho io antony io dia matetika izy ireo no mitomany mikiry rehefa eo amin'ny latabatra isika. Fahazaran-tena mahasosotra tokoa izany, soa ihany fa azo esorina.
Voalohany indrindra, ilaina izany aza manome sakafo ho an'ny biby mihitsy avy eo ambony latabatra. Raha tsy izany dia hampirisika an'ity fihetsika ity izahay. Mba hamaranana izany dia tsy maintsy jerentsika ny fitarainany. Raha mbola miziriziry ianao dia fahendrena ny mitondra ny alika hivoaka ny efitrano fisakafoanana rehefa vita ny sakafo. Rehefa mandeha ny andro dia hitsahatra ny hanafatra anao.
Iray amin'ireo olana goavana amin'ny fitondran-tena io ary tena fahita. Ny alika dia biby fiarahamonina izay mankahala ny irery izy ireo, ary noho io antony io dia maro amin'izy ireo no mitomany mafy rehefa avelantsika irery any an-trano izy ireo. Manamarina ny fiainantsika io satria tsy afaka mahafoy ny adidintsika isika.
Ny fomba tsara indrindra hampiasana ilay biby avela irery dia ny mandehana tsikelikely. Voalohany, tsy eo mandritra ny 5 na 10 minitra, ary avy eo ampitomboina tsikelikely ny fotoana. Ka ny biby fiompinay dia hamantatra fa hiara-hiverina aminy isika na ho ela na ho haingana.
Misy olana maro hafa koa io olana io. Na izany aza, aza afangaro ny hyperactivity amin'ny fitaintainanana. Matetika ny alika dia mavitrika tokoa, saingy tsy tokony hisy olana izany. Ny olana dia mipoitra rehefa mahazo fihetsika manelingelina sy / na manimba ilay biby.
Mba hitsaboana hyperactivity, ny dingana voalohany dia omeo ny fampihetseham-batana ilainy ny biby. Ilaina ny mandeha isan'andro ary koa ny lalao. Ny alika hyperactive dia mila tontolo milamina ihany koa mba handosirana ny adin-tsaina. Na izany aza, indraindray dia ilaina ny mitodika any amin'ny mpampiofana matihanina.
Ny herisetra dia mety manana ny fiandohany amin'ny antony maro: tahotra, fitaintainana, trauma ... Na mifanohitra amin'ny olona na amin'ny biby hafa dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra atrehantsika izany. Misy torolàlana vitsivitsy hanampy antsika hampitsahatra ity fihetsika mahery setra ity fa ny tsara indrindra manakarama ny serivisy ho an'ny mpanabe.
Mialà sasatra ao an-trano
Zavatra tena fahita izany, indrindra amin'ny alikakely. Ankoatr'izay dia tsy afaka mivoaka izy ireo raha tsy efa vita ny vaksiny rehetra, eo amin'ny 12 herinandro eo ho eo. Saingy amin'ny tranga sasany dia mitazona izy ireo io fahazarana mahasosotra io rehefa lasa olon-dehibe izy ireo. Mba hampianarana ilay biby hanamaivana ny tenany eny an-dalambe, dia tsy maintsy manao izany isika manolora dia an-tongotra lavitra azy ary omeo valisoa izy isaky ny mitondra azy ireo eny ivelany. Indraindray dia dingana miadana be izy io, ka tsy maintsy handany faharetana be isika.
Tsoahy ny fehy
Olana tena matetika io. Ny alika dia tsy maintsy mandeha amin'ny tadiny mba hialana amin'ny loza sy ny lozam-pifamoivoizanasaingy tia fahalalahana izy ireo. Noho io antony io dia mirona izy ireo hikororosy hihetsika araka izay tiany sy 'handositra' amin'ny fatorany. Mety hiteraka fahavoazana ara-batana izany, indrindra raha voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana ilay biby.
Ny iray amin'ireo tetika mahomby indrindra hisorohana ny alika tsy hisintona ny tadiny dia ny fanoloana ny fehin-kibo amin'ny vozon'akanjo nentim-paharazana, ary koa ario ny fatorana mety hitarina. Ho fanampin'izay, tsy maintsy ampiasaintsika izy handeha eo akaikintsika fa tsy hamela azy handalo antsika mandritra ny diany.
Ny fihetsika manimba matetika dia manafina olana lalindalina kokoa ary mety hiteraka antony maro: fanaintainana nify amin'ny alika kely, tsy fanatanjahan-tena, fitaintainanana misaraka, sns. Ny dingana voalohany hamaranana azy ireo dia ny famaritana ny niandohany. Amin'ny tranga maro dia mila ny fanampian'ny mpampiofana isika mba hanaovana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ny fahazaran'ny alika ratsy sy ny fomba fanamboarana azy ireo
Toetran'ny alika mahay mandanjalanja